Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ
Na ụwa nke kpo oku, ina maka acha anụnụ anụnụ okpomọkụ radiators, Ebe ọ bụ na ọ na-enye ụfọdụ ndozi na ohere ma e jiri ya tụnyere ọdịnala igwe ọkụ eletrik. Tụkwasị na nke a, ekele maka mkpọsa mgbasa ozi na ụdị radiator a, a na-eche na ha na-anọchite anya nnukwu nchekwa na ụgwọ ọkụ eletrik.
Kedu ihe bụ acha anụnụ anụnụ na kedu uru na ọghọm dị n'iji igwe igwe igwe na-acha anụnụ anụnụ?
1 Kedu ihe bụ acha anụnụ anụnụ?
2 Blue okpomọkụ radiators
3 Nkwenye banyere igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ
4 Uru nke iji igwe oku igwe oku
Kedu ihe bụ acha anụnụ anụnụ?
N'ikwu okwu, ahụ acha anụnụ anụnụ anaghị adị ebe ọ bụ okpomọkụ nkịtị. A na-akpọkwa okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ ume ma ọ bụ kpo oku na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla karịa okwu ahịa.
Igwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-adabere na mmetụta Joule, nke James Prescott Joule chọtara na 1841. Mmetụta a na-ekwu na ọ bụrụ na ọkụ eletrik gafere onye na-eduzi ya, akụkụ nke ike nke ume nke ndị electrons na-ebu mgbe ọ na-agafe onye na-eduzi ya, ọ na-agbanwe ghọọ okpomọkụ.
Site na ọrụ a ma na-aga na mmetụta anụ ahụ a, ndị radiators "acha anụnụ anụnụ" na-arụ ọrụ.
Blue okpomọkụ radiators
A na-ahụta igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ dị ka ọkaibe n'ihi oke ike ha dị elu ma bụrụ mmalite nke ọkụ ọkụ eletrik kpochapụwo. Ndị a radiators na-eji ihe mgbochi iji kpoo a okpomọkụ nyefe ọmụmụ akpọ «Blue Sun» nakwa na ọ dị iche na mmanụ dị na radiators.
Njirimara nke radiators na-acha anụnụ anụnụ dị iche na nke ndị nkịtị. Isi ihe dị iche bụ na nhazi ya na nhazi ya. Elu nke radiator bụ nke aluminom ma nwee ihu igwe digitized. Ọzọkwa, dị ka e kwuru na mbụ, mmiri ị na-ekpo ọkụ site n'iji ihe mgbochi abụghị mmanụ nkịtị.
Ọrụ ahụ yiri nke draya ma ọ bụ stovu eletrik, ma dabere na ya na mmetụta Joule. Nguzogide nke ejikọrọ na ọkụ eletrik na-ahụ maka ikpo ọkụ mmiri a na-akpọ Blue Sun na nke a, n'aka nke ya, na-ekpo ọkụ mkpuchi mpụga, na-enye mmụba nke okpomọkụ n'ime ụlọ ebe radiator dị.
Nkwenye banyere igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ
Ekele maka mkpọsa ahịa niile metụtara igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ekwenyere na ịdị irè ya na arụmọrụ ya dị elu karịa nke radiators nkịtị. Ma, nke a abụghị eziokwu. Typesdị radiators ndị a abụghị ndị ọkụ ọkụ eletrik dị ala. Ekwesiri iburu n'uche na na okwu ike, ihe obula nke kwesiri ka ikpo oku eletrik, ma obu na oku, oku, wdg. Ọ gụnyere oriri dị elu. Ya mere, ọ bụ ezie na igwe na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nwere ihe atụ dị elu karị, igwe na-acha anụnụ anụnụ digitized na mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ dị iche na nke radiators ndị nkịtị, ọ pụtaghị na ọ dị oke mkpa radiator nwere obere ọkụ eletrik.
Ee, ọ bụ eziokwu na igwe igwe na-acha anụnụ anụnụ nwere ụfọdụ ndọtị teknụzụ etinyere na imepụta ha. Mmelite dị ka igwe na-acha anụnụ anụnụ nke na-enye anyị ohere ịhazigharị ọnọdụ okpomọkụ nke anyị chọrọ ikpo ọkụ, tinye oge, wdg. Nhọrọ ndị a niile na-enyere anyị aka ịkwalite arụmọrụ nke radiator ma ghara ịlafu ike na-enweghị isi. Otú ọ dị, ndị a na nkà na ụzụ ndozi abụghị ndị pụrụ iche na igwe na-acha anụnụ anụnụ, Ya mere, teknụzụ ọ bụla raara nye ikuku ikuku nwere ike iweta elele eletriki na nchekwa ndị a.
Na nkenke, nyere okwu, ahia na mgbasa ozi nke igwe okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ nwere ike iweta, ọ bụ ihe ọ bụla karịa mmanụ ọkụ mmanụ nkịtị, mana enwere ike idozi na mmemme. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa aha na ọmarịcha ọdịdị mara mma iji dọtakwuo ndị na-azụ ahịa.
Uru nke iji igwe oku igwe oku
Ojiji nke ụdị radiator na-enye ụfọdụ uru ndị a na-aghaghị iburu n'uche na ọkụ eletrik nke ụlọ anyị.
Nke mbụ bụ ike nchekwa. Ọ bụ ezie na ọ naghị anọchite anya nnukwu nchekwa ma e jiri ya tụnyere igwe eletriki eletrik nkịtị, ọ bụ eziokwu na, site na iji nyocha iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ, ha ziri ezi karịa mgbe ị na-edozi okpomọkụ ịchọrọ iji ma, ya mere, obere okpomọkụ na-efu. Ike.
Mmiri mmiri ahụ nke na - agagharị n'ime radiator akpọ Blue Sun, ọ nwere ike ijigide okpomọkụ karịa mmanụ nkịtị. Nke a pụtara na na obere ume, ọ nwere ike ịmịkwu ọkụ.
Ọ bụ kemeghi na nwere ngụ oge. Nke a dị mkpa maka ezinụlọ ndị ahụ n'abalị na-ada, na-adị jụụ na-ekiri telivishọn ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ ma echegbula onwe gị banyere radiator. N'ụzọ dị otú a, ụdị ọkụ ọkụ ọ bụla nwere ike izere ma mebie ike.
Ikuku nke radiator a na-achụpụ na-esite n'akụkụ elu nke ngwa ahụ wee nwee ike kesaa onwe ya n'ime ụlọ ahụ iji kpoo ya ọkụ ọbụna karị.
O nweghi ụdị isi na isi.
Echichi na-akwụ ụgwọ dị obere.
Nhazi ahụ mara mma ma mara mma karịa ndị nke oge a, yana ị nwere ike ịmịnye gburugburu ebe obibi mma.
Ọ bụ ezie na ndị a radiators nwere ụfọdụ uru na ihe ọhụụ, ha nwekwara ọghọm ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ekpo ọkụ ọkụ.
Omume ya dị ala karịa nke radiators ndị ọzọ dị ka nfuli ọkụ. Mgbe arụmọrụ nke ndị a bụ 360%, acha anụnụ anụnụ okpomọkụ radiator bụ naanị 100%, ebe ọ bụ na mmekọrịta dị n'etiti ike dị n'ụdị okpomọkụ nke radiator na ume nke ngwa a na-eri bụ otu.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ụfọdụ uru nke nhazi usoro okpomọkụ na oge, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na mmepụta nke okpomọkụ site na ike eletrik dị oke ọnụ karịa ụdị nrụnye ndị ọzọ.
Dika nkwubi okwu na udiri igwe oku a, enwere ike ikwu na uru ya bara ezigbo uru ma e jiri ya tụnyere nke igwe eletrik eletrik na-ejikọtakwa ya na naanị ihe anyị kwesịrị ile anya mgbe ịzụrụ radiator bụ ndozi dị ka iwu, ngụ oge, thermostat. , Ọdịdị aluminom na ọdịdị, mana na-eburu n'uche mgbe niile na okwu a bụ "acha anụnụ anụnụ" bụ naanị ahịa ma ọ ga-apụta mmụba dị ukwuu na ọnụahịa ikpeazụ nke ngwaahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ
Edemede gị masịrị m nke ukwuu mana o mepụtara obi abụọ.
Nwere ike ịkọwaara m ihe ị na-ekwu mgbe ị na-ekwu na nfuli ọkụ nwere arụmọrụ nke 360%?
-Esi mee ka arụrụ n'ụlọ biodiesel
Ngwaọrụ ịsa ahụ na gburugburu ebe obibi na nkwanye ugwu ịkwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù